ABADLALI ABAPHEZULU BEBHOLA EKHATYWAYO ABANGAMA-25 (ISIKHOKELO SIKA-2021) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda Izinwele ezinabadlali abangama-25 beSoka
Iinwele zomdlali webhola ekhatywayo zanamhlanje kufuneka zipholile kodwa zisebenze. Ngenxa yoko, ezona zinwele zilungileyo zebhola ekhatywayo kufuneka zibe nesitayile ngaphandle kwebala kunye nolondolozo olusezantsi ebaleni. Ngenxa yoko, iyeza…
Iinwele zomdlali webhola ekhatywayo zanamhlanje kufuneka zipholile kodwa zisebenze. Ngenxa yoko, ezona zinwele zilungileyo zebhola ekhatywayo kufuneka zibe nesitayile ngaphandle kwebala kunye nolondolozo olusezantsi ebaleni. Kananjalo, ayothusi into yokuba abadlali bebhola ekhatywayo abaphezulu kwihlabathi bathambekele ekufumaneni iinwele zamadoda ezilungileyo . Umzekelo, UDavid beckham , UCristiano Ronaldo , Leo Messi, Sergio Ramos kwaye Gareth Bale banxibe ezinye zeenwele zebhola ezithandwa kakhulu kwiminyaka yakutshanje!
Phakathi kwabadlali bebhola ekhatywayo abane-mohawks, i-quiffs, undercuts , iyaphela , kunye ikama ngaphezulu , Sifumene ingqokelela eshushu kakhulu yokusika kunye nezitayile. Ke ukuba ujonge indlela entsha yokwenza isitayile seenwele zakho ezimfutshane okanye ezinde kwaye ufuna ukuzama iinwele ezimangalisayo zebhola ekhatywayo, jonga izitayile ezingezantsi kwezinye izimvo!
1Umdlali oBalaseleyo weBhola ekhatywayo
5UStephan El Shaarawy
Shumi elinanyeUDavid beckham
Shumi elinantlanuUFernando Torres
Umdlali oBalaseleyo weBhola ekhatywayo
Kuluhlu lwethu, siqinisekisile ukubandakanya awona magama makhulu kwibhola ekhatywayo, kodwa sikwafuna ukufaka iinwele ezintsha ezizodwa kunye nezitayile ezifanelekileyo ukuzama! Oku kuthetha ukongeza iinwele zase-Yurophu kunye nase Mzantsi Melika.
Ekugqibeleni, abadlali bebhola ekhatywayo basebenza njengokhuthazo kubalandeli kwihlabathi liphela abafuna kungekuphela ukulingisa izakhono zabo zebhola ekhatywayo, kodwa nembonakalo yabo kunye nengqondo yefashoni. Jonga ezi nguqulelo zezinwele ezipholileyo zamadoda namakhwenkwe ukuze ufumane inkangeleko ekusebenzela!
UStephan El Shaarawy
iinwele ezigobileyo kumakhwenkwe
amakhwenkwe akwishumi elivisayo ukucheba iinwele
uphawu lwenyanga yelanga